Maya. Ilaah Aabaha waxaa loo tixgeliyaa kan keliya ee qofka lagu tukado. Waxa kale oo la fahamsan yahay in Masiixu u taagan yahay dhexdhexaadin dhexdhexaad ah oo u dhexeeya Ilaah iyo ninka (Cibraaniyada 7: 25). Sidaa darteed dhammaan salaadda waxaa lagu bixiyaa Masiixa, ama magaca Masiixa (John 16: 23-26).
Waxaa la filayaa in xubin kasta oo ka mid ah kaniisaddu ay isugu soo ururi doonaan cibaadada maalin kasta ee Rabbiga. Qaybta dhexe ee cibaadada waa cunista Cunnada Rabbiga (Falimaha 20: 7). Haddii aan si hubaal ah loo hor istaagin, xubin kasta oo ka mid ah waxay u arkaan ballan-wakhti asbuucii. Xaalado badan, sida xaalad jirro, Cunnada Rabbiga ayaa loo qaadaa kuwa caqabad ku ah ka qaybgalka cibaadada.
Sababtoo ah qayaxan kala duwan ee kaniisadda - soo noqoshada Axdiga Cusub ee Iimaanka iyo dhaqanka - heesaha acappella waa muusiga kaliya ee loo adeegsado cibaadada. Heesadaan, oo aan la socon aaladaha farsamada muusigga, waxay u hoggaansamaan muusikada loo adeegsado kaniisadda apostolic-ka iyo dhowr qarniyo ka dib (Efesian 5: 19). Waxaa la dareensan yahay in aysan jirin awood ku lug leh falalka cibaadada ee aan laga helin Axdiga Cusub. Mabda 'Tani waxay tirtiraysaa isticmaalka muusikada qalabka, oo ay weheliso isticmaalka shumacyada, fooxa, iyo waxyaabo kale oo la mid ah.
Haa. Baybalka Masiixa ee Matthew 25, iyo meelo kale, ayaa lagu qiimeeyaa qiimaha. Waxaa la rumeeysan yahay dhimashada ka dib nin kastaa waa inuu u yimaadaa Ilaah hortiisa xukunka iyo in lagu xukumo sida ku qoran falalka lagu fuliyay intuu noolaa (Cibraaniyada 9: 27). Marka xukunka la sheego, wuxuu ku noolaan doonaa jannada ama jahannamada.
Maya. Maqnaansho kasta oo tixraac ah ee Qorniinka ku saabsan meel ku meel gaar ah oo ciqaabeed kaas oo nafta ugu dambeyntii loo sii daayo jannada ayaa ka hor istaagaya aqbalaadda caqiidada nadiifinta.
Maalin kasta oo ka mid ah toddobaadkii xubnihii kaniisadda "waxaa lagu duugay dukaanka inta ay ku barwaaqoobeen" (1 Corinthians 16: 2). Qadarka hadiyadaha shakhsi ahaaneed waxaa guud ahaan loo yaqaanaa kan keliya ee u bixiyey iyo Rabbiga. Dalabkan lacag la'aanta ah waa kan kaliya ee kaniisaddu ka dhigto. Qiimayn la'aan ama canshuuro kale ayaa la sameeyaa. Waxqabadyo lacag-samaynta ah, sida barkadaha ama badeecadaha, waxay ku hawlan yihiin. Wadar ahaan haddii qiyaastii $ 200,000,000 sanadkan la bixiyo.
In badbaadada nafta qofka waxaa jira qaybo muhiim u ah 2: qaybta Ilaah iyo qaybteeda. Qaybta Ilaah waa qeyb weyn, "Waayo, nimco ayaad ku badbaadisay rumaysadka, iyo haddii aadan ahayn idinka qudhiinnu waa hadiyadda Ilaah, mana aha xagga shuqullada, si aan ninna u ammaanin" (Efesos 2: 8-9). Jacaylkii uu Ilaahay u qabay nin wuxuu u keenay inuu Masiixa dunida u soo diro si uu u badbaadiyo. Nolosha iyo waxbarista Ciise, allabariga iskutallaabta, iyo wacdinta injiilka ee ragga ayaa ka dhigan qaybta Ilaah ee badbaadada.
Inkastoo qaybta Ilaah ay tahay qayb weyn, qaybta aadanaha sidoo kale waa lagama maarmaan haddii qofku jannada ku yimaado. Dadku waa inay u hoggaansamaan shuruudaha cafis oo uu Rabbigu ku dhawaaqay. Qaybta Ninku wuxuu si cad u qeexi karaa tallaabooyinka soo socda:
Maqla Injiilka. Sidee bay ugu qayliyeen kan aan rumaysanayn? Oo sidee bay u rumaysan doonaan kan aanay maqlin? Oo sidee bay u maqli doonaan haddii aan la wacdiyin? (Romans 10: 14).
Rumayso. "Rumaysadla'aantiis ma suurtowdo in loo aqbalo isaga, waayo, kii Ilaah u yimaadaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona," (Hebrews 11: 6).
Toobad keena dembiyadii hore. Haddaba wakhtiyadii oqoonla'aanta Ilaah baa dhaafay, laakiin hadda wuxuu dadka ku amray inay dadka oo dhan wada toobad keenaan "(Falimaha Rasuullada: 17).
Ku qirso Ciise inuu yahay Rabbiga. Bal eeg, waa ayo biyaha, laakiin waa ayo biyaha iyo in kale, maxaa iigu jira inaan xukumo kuwa rumaystay? Oo Filibos wuxuu ku yidhi, Haddaad qalbigaaga oo dhan ka rumaysatid, markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, Waxaan rumaysanahay in Ciise Masiix yahay Wiilka Ilaah "(Falimaha Rasuullada: 8 -36).
Loo baabtiiso cafiska dembiyada. "Markaasaa Butros iyagii ku yidhi, Toobad keena, oo midkiin kasta ha lagu baabtiiso magaca Ciise Masiix dembidhaafkiinna aawadiis, oo waxaad heli doontaan hadiyadda ah Ruuxa Quduuska ah" (2: 38).
Ku noolow nolol Masiixi ah. "Idinku waxaad tihiin jinsi la doortay, iyo wadaaddada boqorka, iyo quruun quduus ah, iyo dad Ilaah iska leeyahay, inaad ogeysiisaan wanaagga kan gudcurka idiinka yeedhay oo idiinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh." (1 Peter 2: 9).